Miarahaba antsika rehetra. - Ny fotoam-pivavahana ny Alahady Pantekosta 23/05 ho avy izao dia ho tanterahana ao @ Salle Tourrière Saint Jean de Vedas. Fidirana @ 10 ora tsy diso satria ny Pastora dia mbola handeha hampivivavaka any Toulouse ny tolakandro. - SALOMA : Tsy hisy ny fampianarana sekoly alahady Ny Tompo anie hitahy antsika.
Miarahaba antsika rehetra. - Ny fotoam-pivavahana ny Alahady 16/05 ho avy izao dia ho tanterahana ao @ Chapelle Eglise Saint Jacques. Fidirana @ 11 ora. Eto an-toerana ny Pastora koa dia hisy ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo. - SALOMA : Hisy ny fampianarana ny sekoly alahady hanomboka @ 10 ora Ny Tompo anie hitahy antsika.
Miarahaba antsika rehetra. - Ny fotoam-pivavahana ny Alahady 02/05 ho avy izao dia ho tanterahana ao amin’ny Chapelle Eglise Saint Jacques. Fidirana amin’ny 11 ora. - SALOMA : Hisy ny fampianarana ny sekoly alahady hanomboka amin’ny 10 ora Ny Tompo anie hitahy antsika.